ညီလင်းသစ်: အဖြူအမည်း စိန်ခေါ်ပွဲ
Posted by ညီလင်းသစ် au 26.11.14
တစ်ချက်ခုတ်နှစ်ချက်ပြတ်ပါလားအစ်ကို... ဖဘရဲ့B&W က ဘလော့အတွက် ပို့စ်တစ်ပုဒ်ဆီရသွားခဲ့တယ်...။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အစ်ကို ပုံကနေတဆင့် စာတပုဒ်ကိုလှလှပပကြွကြွရွရွရေးနိုင်သလို စာတစ်ပုဒ်ကနေလဲ ပုံတစ်ပုံကိုဖန်တီးနိုင်စွမ်းတဲ့ လေးစားရတဲ့ ဘလော့ဂါတစ်ယောက်ပါ...း)
အဟား ... အကိုက ဖြူမည်းစိန်ခေါ်ပွဲကို ဘလော့ဂ်ထဲထိ ဆွဲခေါ်လာတာကိုး။ :P
ဇွန်တောင် ဖဘမှာ တင်ပြီးသား ဖြူမည်းပုံ၅ပုံစလုံး ဘလော့ဂ်မှာ ပြန်တင်ဖို့ စိတ်ကူးလိုက်သေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ဟိုးတစ်ခါက Black & White ခေါင်းစဉ်နဲ့ ဖြူမည်းပုံတွေ တင်ခဲ့တာ ပြန်သတိရလို့ ထပ်သွားမှာစိုးတာနဲ့ မတင်တော့တာ။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ညီလင်းသစ် facebook account မှာရှိမနေတဲ့ အကို့ရဲ့တခြားစာဖတ်ပရိတ်သတ်တွေအတွက် ဘလော့ဂ်မှာ ကြည့်ခွင့်၊ ဖတ်ခွင့်ရသွားတာ ကောင်းတာပေါ့။း)
Great post :) looking forward to upcoming photos, too. What about tagging other bloggers on the blog? I guess it would be more interesting ifaphoto is posted together with the blogger's article.
ဒီပို့စ်လေးကိုဖတ်မိတော့ နောက်ထပ်အနည်းဆုံး လေးပုဒ်တော့ ဖတ်ခွင့်ရအုံးမယ်ဆိုတဲ့ ကြည်နူးတဲ့စိတ် ဖြစ်ပေါ်လာမိတယ်။
သားတော်မောင်ရဲ့ အတွေးအခေါ်လေး ထက်မြက်မှုဟာ ဒီမိဘကပေါက်ဖွားလာတဲ့သူပဲလေ ဒီလောက်တော့ ရှိမှာပေါ့ကွယ်။ ပို့စ်တိုင်းမှာ မှတ်သားစရာလေးတွေ ခြေရာကျန်ခဲ့တယ်။
'အရင် စ,တဲ့နေရာကို တရက်ဦးစားပေးတဲ့ သဘောပါပဲ' ဆိုတဲ့စာသားလေးကို သဘောကျတယ်။ ကာယကံရှင်ရဲ့ အတွင်းသဘောထားကို ပေါ်လွင်စေတယ်။
ကျေးဇူးပါ ညီမရေ...၊ ဟုတ်တယ်ဗျ၊ အနည်းဆုံးတော့ ဘလော့ဂ်မှာ ၅ ရက်ဆက်တိုက် ပို့စ်တွေ တင်ဖြစ်တော့မယ်..။း)
ဟုတ်တယ်လေ၊ ဘလော့ဂ်က ပို့စ်တွေကို ဖဘမှာ တင်သလို ဖဘက နုတ်စ်တွေကိုလည်း ဘလော့ဂ်မှာ ပြန်တင်လို့ ရတာပဲ မဟုတ်လား၊း)
Ma Myat Kyi...
Yes, some photos can speak by themselves whereas the others needacaption. Hmm.. I don't intend to tag other fellow bloggers specifically but all those who are interested are welcome to join for sure. :)
တီတင့်ကတော့ ဖဘမှာကော ဘလော့ဂ်မှာပါ အမြဲတမ်း တက်ကြွနေတာပဲ၊ တီတင့်ရဲ့ နှစ်လိုဖွယ်ရာ ကွန်မန့်တွေအတွက် တကယ်ပဲ ကျေးဇူးပါနော်...။
ကိုညီလင်းရဲ့ ဘလော့ကို မရောက်တာ ဘယ်လောက်တောင် ကြာသွားသလဲဆို ... ဒီ အဖြူအမည်း ပို့စ်တွေ တင်နေတာတောင် မသိလိုက်ဘူး ကိုညီလင်းရေ ... ။
ဒီကနေ့ မွေးနေ့မှပဲ လာကြည့်ဖြစ်တော့တယ်။
မင်္ဂလာရှိသော မွေးနေ့ ဖြစ်ပါစေ ... ။